Iswiidhen: Joojin meyno taageerada dhaqaale ee loo fidiyo Masar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iswiidhen: Joojin meyno taageerada dhaqaale ee loo fidiyo Masar
La daabacay fredag 16 augusti 2013 kl 13.05
Dawladda Iswiidhen ayaa shaaca ka qaaday in aaney wax isbedel ah ku talo jirin iney iminka ku sameeyso ama xanibto taageerada dhaqaale ee dalkani u fidiyo Masar.
Iyo sidoo kale in dalkani aanu iminkadan la joogo wax taageero dhaqaale ah si toos ugu fidin maamulka dawladda Masar, hase yeeshee taageerada uu dalkani bixiyo ku wajahan tahay ururro iyo kooxo ku howl-gala sidii loo hagaajin lahaa howlaha xuquuqda bani'aadamka iyo xuquuqda haweenka. Waxaase laga cabsi qabaa in howlahaa qudhoodu noqdaan kuwo adkaada, sida uu sheegay Jon Hedenström, ahna madaxa laanta SIDA ee arrimmaha Masar:
- Xaaladda iminka jirta ayaa dhalineysa inay aad iyo aad u adkaato in howlaha qaarkood wax laga qabto dalka Masar. Qaasatan kolka xaaladdu sida degdegta ah uu isbedel ugu dhacayo sida iminka. Hase yeeshee taageerada dhaqaale waxay inta badan gashaa kooxo dalkaasi ka haya howlo muhiimad ballaaran bulshaa ugu fadhiya.
Taageerada dhaqaale ee dalkani u fidiyo dalka Masar ayaa isugu jirta qeybaha mid loo fidiyo waddammada dhaca waqooyiga Afrika kadib is-bedelladii carrigaa ka biloowdey ee kacaammadii kala duwanaa. Iyo sannadkan oo dalkani u qoondeeyay dalka Masar taageero khaas ah oo gaareysa 50 milyan oo koron.
Miisaaniyaddaasina oo haba yaraatee aaney wax ka mid ah aan lagu taageerin dawladda, balse gacanta loo geliyo ururro-bulshadeedka ku howl-gala arrimmaha dimoqoraadiyadda iyo xuquuqda bani'aadamka, sidaa daraadeed ayaaney u ahayn tallaabo wanaagsan in taageeradaa la jaro, sida uu sheegay Fredrik Reinfeldt.
Jon Hedenström, oo xaruntiisu ku taalo safaaradda uu dalkanik u leeyahay Masar, hase yeeshee iminka fasax ugu sugan Istockholm uuna dhowaantan dib ugu noqon doonaa dalka Masar. Taageerada dhaqaale ee dalkani bixiyaa waa mid laga helo faa'iido badan, sida uu sheegay, waana mid sidoo kale loo baahan yahay mustaqbalka xitaa haddii xaaladdu ka sii dartay:
- Waxaa iminka lagu sugan yahay xaalad cakiran. Waana mid sii adkeeynaysa hoowlaha ururradu ka qabtaan sidii loo hagaajin lahaa xuquuqul insaanka iyo nidaamka dimoqoraadiyadda. Waana mid loo baahan yahay in la adkeeyo kolka lagu sugan yahay xaalad Masar maanta ka taagan oo kale.